Sida loo hagaagsan iPhoto Pictures in iPad
Dadka qaar waxa ay ku dooneysaa "sida aad u hagaagsan sawirada iPhoto in iPad". By dhoofinta sawir iPhoto si Mac in iPad, aad awoodaan in ay aragto sawiro wanaagsan loo soo abaabulay regulary ama iyaga dadka kale si fiican u wadaagaan. Sida xaqiiqadu, ma aha mid aad u adag tahay in la sawiro ka iPhoto wareejiyo iPad. Waxaa weli siyaabo dhowr ah. In socda, waxaan daboolay 2 siyaabo fudud oo kaa caawinaya in aad sawiro ka iPhoto dhaqaaqo iPad. Dooro xalka in ay kugu habboon.
Xalka 1. Transfer Photos ka iPhoto in iPad la Wondershare TunesGo Retro (Mac)
Xalka 2. nidaameed iPhoto Pictures in iPad
Xalka 1. Transfer Photos ka iPhoto in iPad la TunesGo Retro (Mac)
Waxaad had iyo jeer u baahan yihiin si ay u maareeyaan sawiro ku saabsan iPad, sax? intii la xorayn, ama midkood cusboonaysiiyo sawirada. Haddii arrinku sidaas yahay, si adag ayaan reommend aad isku daydo Wondershare TuensGo (Mac) si ay u soo bixi pictures ka iPhoto in iPad, maxaa yeelay waa qalab dhamaystiran oo loogu talagalay si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala si ay u gudbiyaan oo la maareeyo sawiro.
Bedelka Photos ka iPhoto in iPad ka kaaftoomi ikhtiyaar ah,
Samee sawirada on iPad inay si fiican u maamuli photos;
Delete sawiro ka iPad oo bilaash ah ilaa meel dheeraad ah;
Bedelka sawiro ka iPad in iPhoto u gurmad ama tafatir;
Talaabooyinka: Photos Dhoofinta ka iPhoto in iPad
Tallaabada 1. Ku rakib TunesGo Retro (Mac)
Fadlan kala soo bixi version tijaabo ah TunesGo Retro (Mac) ku saabsan Mac. Markaas raac dardar si ay u soo dajiyo. Waxaa si buuxda la jaan qaada Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6. Waxay u ordaan oo xiriiriyaan iPad aad Mac dhex cable USB ah. In labaad ah, aad iPad la ogaan doonaa oo soo bandhigay TunesGo Retro (Mac) uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Nuqul sawiro ka iPhoto in iPad
In galeeysid bidix, guji Photos inay soo qaadaan suuqa kala sawir ku yaal dhinaca midig. On line ugu sareeya, guji dar . In file suuqa kala pop-up browser, maraan si MEDIA > Sawirrada > iPhoto . Markaas, dooro photos in aad jeceshahay si ay u gudbiyaan. Riix Open in ay sawiro ka iPhoto wareejiyo si aad iPad.
Video Tutorial: Saxiixa Pictures ka iPhoto in iPad la Wondershare TunesGo Retro (Mac)
Si aad u dhoofiyaan sawirada iPhoto in iPad via Lugood, fadlan u cusbooneysiin Lugood si aad u version ugu dambeeyay. Markaas raac tallaabooyinka hoose.
1. Daahfurka Lugood aad Mac. In Lugood, guji hindisaa iPad , oo waxaad ka heli doontaa dhammaan isha ku saabsan sare ee daaqadda. Dooro " Sawirro . tab
2. Hubi doorasho nidaameed sawiro ka: . dooro iPhoto ka mid ah liiska Tani shidaa fursadaha - hagaagsan oo dhan iPhoto maktabadda si ay iPad ama kaliya albums xulay adigoo fursad u soo xulay albums, dhacdooyinka ... .
3. Dhinaca hoose ee midig ee shaashada, guji nidaameed oo sug u hagaagsan u dhammayn.
4. Marka syncing dhamaystirtay, aad ku raaxaysan kartaa sawiro uploaded ee Photos codsiga on your iPad. Sawirrada iPhoto uploaded ku tusi doonaa sida Album.
> Resource > iPad > Sida loo hagaagsan iPhoto Sawiro / Photos in iPad